राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उद्घाटन – Sadarline
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज रङ्गशालामा बिहीवार ८औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको भव्य उद्घाटन भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भब्य समारोहका बीचमा उद्घाटन गरिन ।
उद्घाटन मन्तब्यमा राष्ट्रपति भण्डारीले राज्यलाई अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा चिनाउने खेल उपयुक्त माध्याम भएको बताईन । उनले खेल र खेलाडिको बृत्ति विकाशको लागि नियमित प्रतियोगिताको आयाजना गर्न सुझाव समेत दिईन ।
उनले खेलकुदको जग विद्यालय भएकोले विद्यालय तहमै खेलकुदको विकास गर्न आवश्यक रहेको औल्याईन । उद्घाटन शत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार बिष्टले स्वगत गरेका थिए भने सो अवसरमा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र प्रदेशनं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्र्रेलले शुभकामना ब्यक्त गरे । सो प्रतियोगितामा ७ प्रदेश, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तथा एनआरएन गरी ११ टोलीका खेलाडीबीच प्रतिष्पर्धा भईरहेको छ । प्रतियोगितामा पाँच हजार २ सय ११ खेलाडी सहित प्रशिक्षक, ब्यवस्थापक, अफिसियसल, रेफ्री सङ्घ प्रतिनिधी गरी ११ हजारको सहभागिता रहेको छ ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन बिहीवार हुने भएपनि चैत २७ गतेदेखि नै खेलहरु शुरु भईरहेका छन् । खेलकुद बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देहीमा भईरहेको छ । केही खेल काठमाडौं, ललितपुर र पोखरामा पनि खेल भईरहेका छन् । ओलम्पिक टर्च लाईट बिहीवार बेलुकी नेपालगञ्ज रंगशाला पुराई ओलम्पियन तथा प्रदेश नं. ५का सांसद सुरेन्द्र हमालले बालेका थिए ।
सदरलाइनडटकम, काठमाण्डौ : एक भारतीय मतदाताले झुक्किएर गलत राजनीतिक पार्टीलाई मत दिएपछि आफ्नो बायाँ हातको चोरी औँला काटेका छन् । बहुजन समाज पार्टीका समर्थक बताउने पवन कुमारले हतारमा गल्तीले भारतीय जनता पार्टीलाई भोट दिन पुगेपछि आफ्नो औँला नै काटेका छन् । ती युवकले गलत पार्टीलाई भोट दिएको कारण अफशोच जनाउँदै […]
७ पुष २०७४, शुक्रबार १९:०४
१४ माघ २०७४, आईतवार १८:५२